Drones - Akụrụngwa efu | Ngwaọrụ akụrụngwa (Peeji nke 2)
EHang na-egosi anyị ihe ya tagzi-drone nwere ike
Wherebanye ebe anyị ga-ekwu maka ọganihu nke ụlọ ọrụ EHang nwere afọ abụọ na drone kwụ ọtọ nwere ikike iburu ndị njem n'ime.
BioCarbon na-eme ka o doo anya na drones ya nwere ike ị kụrụ osisi 100.000 n'otu awa
BioCarbon jisiri ike mepụta usoro drones ya ka ha nwee ike ịkụ mkpụrụ osisi 100.000 n'otu awa.
Amazon ugbua na-eche echiche banyere mmepe nke drones nwere ike ịchaji batrị nke ụgbọ ala eletrik
Amazon jisiri ike nweta patent nke na-egosi otu sistemu iji kwụọ batrị ụgbọ ala eletrik gị site na iji drone.
Junta de Andalucía ga - eji drones chekwaa ụmụ amaala
Otu nnukwu nsogbu a na-alụ na Andalusia bụ nke inwe ike ichedo na ịchọpụta ...
Russia enweelarị usoro akwụkwọ mgbochi na-arụ ọrụ
Russia gosipụtara obi ya na ikpo okwu ya zuru oke nke nwere ike iweghachite ụdị mwakpo nke ọtụtụ drones, otu nke ha na-arụ ọrụ na United States na na ha emepebeghị.
Xiaomi na-ebupụta batrị ụgbọ ala nke nwere ike ịgba ụgwọ ọbụla gị
Xiaomi na-enye Mi Inverter Inverter ọhụrụ, batrị mAh 20.000 mAh nke nwere ike ịbụ nke gị maka ihe na-erughị euro 60 ma nwee ikike ịkwụ ụgwọ site na mkpanaka gị, mbadamba nkume gị site na ihe dị iche iche dị ka mmiri gị ma ọ bụ laptọọpụ gị
Otu drone bu isi ihe iji zoputa mmadu abuo di oke egwu
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka otu drone si bụrụ akụkụ dị mkpa na nnapụta nke ndị na-eto eto abụọ tọrọ atọ na ike ugbu a n'otu osimiri dị n'Australia.
Russia nwere drones nuklia na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ya
Dabere na mkpesa ezighi ezi sitere na Ngalaba Na-ahụ Maka Nchebe nke United States, a kwadoro na Russia nwere ọrụ Stage-6 na-aga n'ihu, nke mepụtara mmiri mmiri nwere ikike iji rụọ ọrụ na redio nke 10.000 kilomita site n'iji nuklia 10 ụkwụ megatọn.
DJI Mavic Air, mara onye ga-anọchi Mavic Pro na-adọrọ mmasị ọfụma
Anyị ekwesịghị ichere ogologo oge maka ụlọ ọrụ buru ibu ma dị ka DJI iji webata ọgbọ nke nọchiri Mavic Pro, ụgbọ mmiri ọhụrụ nwere ikike na arụmọrụ ka ukwuu nke a maara ugbu a dịka DJI Mavic Air.
Boeing na-egosi ụgbọ elu ọhụrụ ya nwere ike ibu ihe ruru kilogram 200
Boeing ka juru ndị obodo na ndị ala ọzọ anya na ụwa drone n'ihi ngosipụta nke igwe eletriki eletriki ọhụụ nwere ike iburu ụdị ahịa ọ bụla nke arọ ya anaghị agafe kilogram 200.
Japan mepụtara ụgbọ mmiri na-eme njem iji gbochie mba ahụ igbu onwe ha 'ntiwapụ'
Site na Japan, ekpebiela ịkụ nzọ na ojiji drones iji nyochaa mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ ma si otú a gbochie ndị mmadụ igbu onwe ha n'ụdị ọnọdụ ndị a.
Otu ọdụ ụgbọ mmiri drones na-awakpo ntọala Russia na Syria
Ugboro abụọ Russia dị na Syria ụbọchị ole na ole gara aga bụ ndị drones na-achịkwa achịkwa, mwakpo nke, na-esote nyocha oge mbụ, onye ozi nchekwa Russia na-egosi na ndị agha mebere ya na United States.
Tello, ihe na-adọrọ mmasị na drone na asọmpi asọmpi
Ryze Tech juru anyị anya site na mwepụta nke Tello, obere obere mmiri nke ejiri teknụzụ kachasị mma sitere na Intel na DJI nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma kachasị mma iji obere ụmụaka nọrọ n'ụlọ anyị.
DGT ga - eji drones si na 2019
Dika ekwuputara n'ihu ọha, o doro anya na General Directorate nke Okporo ụzọ, DGT, ha na-atụ anya na 2019 ka ha nwee drones ọhụrụ ha ga-eji nke ọma na-ejikwa okporo ụzọ okporo ụzọ dị iche iche n'ụzọ dị irè.
Mgbe fiasco na azụmahịa nke Karma, n'ikpeazụ ụlọ ọrụ GoPro, na nhazigharị ime obodo, ekpebiela ịhapụ ndị mmadụ 200 na 300 site na nkewa nke ngwaahịa ikuku.
China enweela nyocha ụwa kachasị elu na ọgụ ọgụ
Ndị agha China gosipụtara WingLoong II, nyocha ụwa na teknụzụ kachasị elu na ọgụ ọgụ.
Iwu ọhụrụ maka ụgbọ elu nke drones adịworị n'ọrụ
Saturdaybọchị Satọde gara aga, iwu ọhụrụ ndị na-achịkwa ojiji nke drones n'enweghị nsogbu malitere, na-enye ha ohere ifefe obodo, igwe mmadụ na ọbụnadị n'abalị.
Vidio: Nke a bụ otu ndị agha Israel si sniper drone na-arụ ọrụ
N'ime ọnwa ole na ole anyị matara na ndị agha Israel nwere mmemme ebe ha nọ ...
Airgbọ elu ga-enwe ike ịgbanye etiti ụgbọ elu maka ekele Boeing drone a kwụ ọtọ
Planesgbọ elu, n'ụkpụrụ ndị agha, ga-enwe ike ịgbanye mmanụ n'agbụrụ ụgbọ elu n'ihi ekele kwụ ọtọ nke Boeing na-ewu.
Kedu ihe na-eme mgbe otu ụgbọelu na-adaba na ụgbọ elu? Na China ha nwere azịza ya
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ule ndị emere na China iji gosipụta ihe na-eme mgbe otu ụgbọelu dara na ụgbọ elu.
Ikike iji ụgbọelu drones na Spain na-arị elu
Site na AESA mara ọkwa na, ruo ugbu a, na Spain, enweela ihe karịrị ndị ọrụ 2.700 drone nwere ikikere nke gọọmentị nyere.
Chọta ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-enye ekele maka webụsaịtị a
Ekele maka weebụsaịtị ọhụrụ a ị nwere ike ịchọta ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri na onye na-anya ụgbọelu na-edekọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ ịchọrọ
China na-anwale ule azụmaahịa kachasị ukwuu n'ụwa
Site na China ekwuputala na ha emeela nyocha nke ọma na ihe a na-ewere dị ka ụgbọ elu azụmahịa kachasị ukwuu n'ụwa.
United States amachibidoro ndị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na-efe efe n'elu ụlọ ọrụ nuklia nke mba ahụ
United States ka malitere iwu ọhụrụ nke a machibidoro ya iwu ịgbagha ụlọ ọrụ nuklia nke mba ahụ.
Nke a bụ nsonaazụ nke iji ihe karịrị 1000 drones na-enwu obodo
N'afọ a, Fortune Global Forum kpebiri ịhọrọ obodo China nke Guangzhou iji nọrọ n'ụlọ…
N'oge na-adịghị anya ọ ga-abụ iwu iji ofufe drones n'abalị na n'akụkụ ụlọ
Ekele maka Iwu Royal, tupu ikike site n'aka AESA, onye nchịkwa ọ bụla ga-enwe ike ife ụgbọ elu ha n'abalị ma ọ bụ n'akụkụ ụlọ na igwe mmadụ.
N’Australia, ha ga-eji drones mata ebe azụnọ shark dị n’akụkụ osimiri
Dika nkwuputa ohuru si Australia, obodo a ga-ebido iji drones ichoputa umu azu shark na mbu.
South Korea na-akwado ụsụụ ndị agha nke drones
Ndị agha South Korea na-ezube ịkwado ngalaba ọhụrụ nke ndị agha drones iji buso ndị agbata obi North Korea agha.
Waysgbọ oloko dị na Spain ga-enyocha drones
Otu ìgwè nke ụlọ ọrụ nzuzo na nke ọha na eze nke SigmaRail na-eduzi ga-amalite nyochaa okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eji drones.
Amazon ga-ebibi drones ya ma ọ bụrụ na achọpụta ụdị mmebi ọ bụla
Amazon na-enweta patent ọhụrụ site na nke a ga-esi gbasaa drones ya n'usoro nke ịchọpụta ọdịda na ụgbọ elu.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọtụtụ n'ime ha ejiri ego gọọmentị kwado ha, na-arụ ọrụ taa na mmepe ...
SKYF na-enye ụgbọ elu ọhụrụ ya nke nwere ike ibu ihe ruru kilogram 650
SKYF, ụlọ ọrụ Russia nke nwere ọpụrụiche n'ichepụta drones, na-enye ụgbọ mmiri ọhụrụ ya ikike ibugharị ruo kilogram 650.
DJI Goggles RE, iko maka ụwa nke asọmpi
DJI Goggles RE bụ aha eji webata asọmpi asọmpi ọhụrụ nke ndị na-emepụta drone nke China mepụtara.
Apple ịhapụ ụdị nke ya DJI Mavic Pro
Apple jiri uru nke nkwekọrịta ya na DJI malite ire na ụlọ ahịa ya, ma nke ọma ma nke anụ ahụ, ihe atụ pụrụ iche nke Mavic Pro.
DJI na-eyi onye ọrụ nke kọọrọ ihe nchebe na sava ha egwu
Mgbe ịmepe mmemme ka onye ọrụ ọ bụla kwụọ ụgwọ maka ịkọ akụkọ ahụhụ, ihe programmer natara n'aka DJI bụ egwu.
Dedrone na Axis Communications na-eweta teknụzụ ọhụụ nwere ike ịchọpụta drones
Dedrone na Axis Communications sonyeere ndị agha iji zụlite ikpo okwu nke nwere ike ịchọpụta ma chọpụta drones n'ime otu mpaghara.
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka 668-R8WHm, obere drone nke nwere igwefoto HD na WiFi nke nwere ike ịbụ nke gị na erughị euro 50.
Ha mepụtara oyiri nke robot R4-P17 si Star Wars
Alejandro Clavijo mepụtara oyiri nke R4-P17 nke Lucasfilm kwadoro, ụlọ ọrụ nwere Star Wars Saga ...
NASA ga-eji drones nwere ọgụgụ isi wee wee mara ọnọdụ mmiri mmiri anyị
NASA weputara oru ohuru nke o ga eji gbalie achoputa mgbanwe ndi n’eme n’oké osimiri n’ihi mgbanwe onodu ubochi.
Alibaba na-ebuputa ngwugwu izizi ya site na drones
Alibaba bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa na-anwa ịmalite ịmalite mmemme ha na ...
Japan weputara usoro ohuru iji nye ndi nri nri na Fukushima
Rakuten na Lawson, ụlọ ọrụ abụọ buru ibu na Japan, amalitela mmemme iji bute nri na ngwugwu n’obodo ndị Fukushima metụtara.
Nkwalite na-arụ ọrụ na ikpo okwu ọhụrụ maka njikwa okporo ụzọ drone
Ministri nke Development nke Spain ka kwupụtara ọkwa ga-esi mepụta ikpo okwu maka njikwa okporo ụzọ ụgbọ mmiri.
Ekele maka ngwaọrụ DJI ndị ọchịchị ga-enwe ike inyocha okporo ụzọ ụgbọ oloko
AeroScope bụ aha nke DJI mere baptizim ngwa ọrụ ọhụụ ya nke na - enyere gị aka inyocha na ịchọpụta drones ndị na - efe efe n'otu mpaghara.
Portugal ga-emepụta mpaghara pụrụ iche iji nwalee ma mepụta drones ọhụrụ
Dị ka e kwupụtara na eze, na Portugal ha chọrọ inwe ike ịkwado ebe ọhụụ ebe ndị nrụpụta niile nwere ike ịnwale drones kpamkpam.
Spain ga-enwe iwu maka ojiji drones na njedebe nke afọ
Dịka nkwupụta nke Mịnịsta Development nke Spain ugbu a, mba anyị ga-enwe iwu ọhụrụ maka iji drones n'ike n'ike nke afọ.
Ndị ụlọ ọrụ America na-agbalite usoro mmemme ha maka Donald Trump's iwu ọhụrụ
N'ihi ọchịchị Donald Trump, ụlọ ọrụ ndị America ga-enwe ike ịme ka mmepe nke mmemme ha sikwuo ike maka nnyefe nke nchịkọta na drones
Ngwá agha ọhụrụ a sitere na United States nwere ike ịgbatu ụgbọ mmiri ọ bụla na-abịa n'ime nso
Raytheon, onye ọrụ nkwekọrịta maka United States Army, ka gosipụtara ngwa ọgụ ọhụụ ọhụrụ ya nke nwere ike ịgbatu ụdị ụgbọ mmiri ọ bụla na ahịa.
Planegbọ elu ndị njem dabara na drone na Quebec
Obodo Canada nke Quebec ahụla ihe ọghọm nke anyị na-ekwu maka ya na nke na-ese onyinyo ya ogologo oge ...
N'oge emume izu Gitex Technology, ndị uwe ojii Dubai gosipụtara nke mbụ hoverbike ọhụrụ ha iji gagharị n'okporo ámá.
Aena ga-eji drones n'ime ọdụ ụgbọ elu asaa ya mee nyocha nche
Mgbe nzọ nke ụlọ ọrụ ndị otu Boeing na-eme iji nweta ọrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ...
CityAirbus, Airbus drones dị njikere ugbu a iweghara obodo anyị
Airbus 'drones drones, nke a na-akpọ CityAribus, ga-amalite ịrụ ọrụ n'obodo kachasị ukwuu n'ụwa n'etiti 2018.
Volocopter na-anwale tagzi ya na mbara igwe nke Dubai
Mgbe ogologo oge ọ na-echere, Volocopter emesịrị jisie ike nwalee tagzi drones ya na mbara igwe nke Dubai.
Njem Drone, echiche ụgbọ ala ọhụrụ na-efe efe nke ga-abịa ahịa n'oge na-adịghị anya
Njem Drone bụ echiche ọhụrụ nke ụgbọ elu na-efe efe ebe ị nwere ike ịnya n'ime ya ma na-aga ebe ọ bụla ịchọrọ n'ihi igwe ọkụ eletrik ya.
Oge One Industrial na - egosi anyị igwefoto ọhụụ ọgbara ọhụrụ 190 megapixel
Obi abụọ adịghị ya, e nwere nnukwu azụmahịa n'azụ iji ndị ọkachamara drones. Akaebe nke ihe m na-ekwu ...
Drones dị ka ndị ọkachamara mkpuchi maka ụgbọ ala gị na ụlọ gị
Companieslọ ọrụ ịnshọransị na-amalite ile anya nke ọma ma ha dochie ndị ọkachamara ha na drones nke na-arụ otu ọrụ ahụ.
Yuneec H520, ihe ohuru ohuru nke gbadoro anya iji aka ya
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ngosi nke ọhụụ Yuneec H520 ọhụrụ, nke mmiri mmiri nke atụmatụ ya na arụmọrụ ya na-eche maka ahịa ọkachamara.
Nke a bụ ihe a na-ewere dị ka nke mbụ amphibious drone dị ka
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka ngosi nke Colyaer Freedom S100, nke mbụ amphibious drone na mbara ala, ihe atụ nke UVS Intelligence System kere.
Ekele maka retinas ọhụrụ a, drones ga-enwe ike ịgagharị n'ọchịchịrị na ngwa ngwa karịa karịa n'ụzọ niile dị nchebe.
Seadrone enweelarị mmiri ụgbọ mmiri mbụ ya
Seadrone, ụlọ ọrụ nke Indra kere, gosipụtara ndị mmadụ maka oge mbụ ọrụ nke ụgbọ mmiri ọhụrụ ya maka ọrụ nnapụta.
United States na-emepụta ngwa agha laser nke nwere ike ịgbada drones na sekọnd
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke mmepe na ule, United States Army yiri ka ọ nwere ngwa agha ọhụụ ọhụrụ nke nwere ike ịgbanye drones na sekọnd.
E jidere nwoke zụrụ drones maka Daesh na Mérida
N'oge a, ọ bụ onye nlekọta ime obodo n'onwe ya gosipụtara njide na Mérida nke nwoke raara onwe ya nye ịzụta drones maka Daesh.
Switzerland ga-eme ka nnyefe nnyefe nwere drones na-esote Ọktọba
Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ nke ogo na omimi nke Google ma ọ bụ Amazon nke na-arụ ọrụ n'esepụghị aka na mmepe ...
Skyfront na-eme ka otu drones ya nwere ike ijide elekere 4 na nkeji 34 na-efe efe
Skyfront na-enye anyị vidiyo ebe ọ na-egosi anyị otu n'ime drones ya nwere ike isi nweta nnwere onwe ụgbọ elu nke 4 awa na 34 nkeji.
Na Septemba 25, usoro ụgbọelu Aerotec na UCAV na-amalite
Mahadum Katọlik nke Ávila, ya na Aerotec, ga-ebido usoro ọkwọ ụgbọelu ọhụrụ ya na Septemba 25.
Mmiri a nwere ike ịchọpụta shark na arụmọrụ dị ukwuu
Companylọ ọrụ Australia bụ Little Ripper Group ka kpughere ụgbọ mmiri nke nwere ike ịchọpụta shark na 90% ziri ezi.
Red Cross na-amalite mmemme ohuru nke na-achọ iji nyochaa d ọdachi ndị na-emere onwe ha na drones
Red Cross ka kwuputara na ha na-achọ ibido mmemme ebe ha ga-achọ ịkwado ndị ọkachamara n'ihe gbasara ọdachi ndị na-emere onwe ha nwere drones.
UN na-amụ otu esi emepụta nchekwa data yana ndekọ nke drones niile arụpụtara
N'otu n'ime nzukọ UN gara aga, a tụpụtara ya ịmepụta nchekwa data nwere ike ịnwe ndekọ nke drones niile arụpụtara.
DJI ga - ekwe ka drones ya fee n’enweghị ịntanetị
DJI ka kwuputara na ndị injinia ya na-arụ ọrụ na ụzọ iji chịkwaa drones ha na-enweghị mkpa njikọ ịntanetị.
UNICEF ga-eji drones bute ọgwụ na Oceania
UNICEF ka kwupụtara atụmatụ ya maka imepụta oru iji weta ọgwụ n'agwaetiti dị iche iche nke Oceania site na iji drones.
3DR na DJI ga-eme ka ngwaahịa ha dakọtara
N'ikpeazụ, mgbe ọnwa ole na ole kwurịtara okwu, 3DR na DJI ka kwupụtara na ha ga-amalite ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ngwaahịa ha kwekọọ.
Facebook ga-eji ojiji drones na Satellites weta ịntanetị na ụwa niile
Facebook mara ọkwa na ọ ga-ebido iji drones na satellites rụọ ọrụ ya nke ha ga-eweta na intaneti n'ụwa niile.
Mmiri Suez Spain na-emepụta ọgbọ ọhụụ nke drones maka nyocha nsị
Suez Water Spain ka kwupụtara ọkwa ọhụrụ ebe ọ ga-achọ ịhazi na imepụta drones nwere ike ịlele sistemu nsị.
France ga-eji ndị agha ọhụrụ drones kwalite ndị agha ya
N'ikpeazụ, France kwenyesiri ike na Ngalaba Nchebe ya ga-azụta usoro drones nke ejikere iji kwadebe ndị agha ya.
Lilium na-achịkwa ịwelite nde 90 iji mee ka tagi ya na-efe efe bụrụ eziokwu
Lilium bụ ụlọ ọrụ dị n’azụ echiche na-egbukepụ egbukepụ nke na-achọ ime ka tagzi na obodo anyị dị iche iche drones.
DeltaQuad bụ ihe okike kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Dutch Verical Technologies, drone nwere ike imebi akwụkwọ ikike niile nke ụwa.
Ndị a bụ akwụkwọ ọhụụ dị na DJI Mavic Pro na Phantom 4 Pro
N'ikpeazụ, anyị agaghị echere ogologo oge maka ụlọ ọrụ China DJI iji kpọsaa akụkọ niile dị na Mavic Pro na Phantom 4 Pro.
Ndị DGT ga-eji ụgbọelu na drones nye ndị ọkwọ ụgbọala mma
N'ime usoro mgbasa ozi ọhụrụ nke DGT wepụtara, a mara ọkwa na ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite iji drones na ụgbọ elu ọkụ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mma.
Fọdụ ndị na-azụ ahịa ọgwụ ọjọọ na-amalite iji drones buru ibu gafere ọgwụ gafere oke
Ndị na-agba ọgwụ ọjọọ kasịnụ n’ụwa ebidola iji nnukwu drones nweta ọgwụ gafere oke mba dị iche iche.
Nke a bụ égbè Kalashnikov kere iji gbaa ala drones
Ndi Russia Kalashnikov Consortium ka biputara ozi banyere mmepe nke egbe ohuru nke nwere ike igba ala drones.
Melite ihe gị DJI tupu oge Septemba ma ọ bụ na ọ nweghị ike iji ya
DJI ka tọhapụrụ mmelite dị oke egwu maka drones ya niile, nke a ga - emerịrị tupu Septemba ma ọ bụ na ha agaghị aba uru.
US na-ewepụta akụ ụta 'adịghị ọnụ' iji gbaa drones
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka ihe agha ọhụrụ 'akụ na ụba' nke United States mepụtara iji gbatuo drones bụ otu ha si arụ ọrụ.
Amazon nwetara patent ọhụrụ metụtara ọrụ ngwugwu ya
Amazon na-etinye akwụkwọ maka patent ọhụrụ metụtara mmemme mmemme zuru ezu nke onwe ya.
DJI na-enye drones ya ọnọdụ ịmata ihe 'offline'
DJI ka kwuputara mwepụta nke ọnọdụ 'offline' ọhụrụ ebe drones ya anaghị ezipu foto, vidiyo ma ọ bụ ndekọ ụgbọ elu na sava ụlọ ọrụ
Ndị agha drones ga-enwe ọrụ nke inyocha oke ọhịa na-achọ ndị na-ere ọkụ
Na nke mbụ ya na Spain, ndị agha rutere nkwekọrịta na obodo kwụụrụ onwe ha inyocha oke ọhịa site na iji drones ndị agha ya.
BioCarbon Engineering nwere drones ya nwere ike iweghachi oke ọhịa dị njikere
Companylọ ọrụ BioCarbon Engineering nwere mmemme ọhụrụ ya nke ha ga-eji chọọ iji jupụta oke ohia na-eji drones.
Ndị agha Uruguayan mepere asọmpi maka ịzụrụ drones ọhụrụ ya
Dika ihe edeputara na akwukwo ugbua, odi ka ndi agha nke Uruguayan gha emepe asọmpi nke ga - ejedebe nzụta 20 drones.
Ha jidere onye jihadist chọrọ ịgbapụ onye agha America na drone
Onye Alakụba Alakụba Alakụba bụ onye nwara ịgbapụ onye agha US Army site na iji njikwa ụgbọelu na-achịkwa nke ọma.
Ndị agha US nwere ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ iji gbaa ala drones
United States na-enye ndị òtù ndị agha ya ihe ọkụkụ na-acha akwụkwọ ndụ ka ha nwee ike gbatuo ụdị drone ọ bụla ma ọ bụrụ na ha ewere ya dị ka ihe iyi egwu.
Amazon na-egosi nkọwa ndị ọzọ gbasara nyiwe mkpanaka ya maka drones
Banye ebe anyị ga-ekwu maka patent ọhụrụ ha bipụtara site na Amazon ebe anyị nwere ike ịhụ ihe igwe eji agagharị drones ha ga-adị.
Ndị agha US kwupụtara na DJI drones 'enweghị ike'
Ndị agha United States ka kwupụtara nkwupụta na-ekwupụta dI dI drones dị ka ụdị 'adịghị ike', yabụ ha ga-akwụsị iji ha.
Volocopter enweta ego ohuru nke euro 25
Taa ụlọ ọrụ Volocopter dị na akụkọ ọzọ n'ihi eziokwu ahụ bụ na, ọzọkwa, ọ ka natara ego nde mmadụ nde mmadụ, nde 25 oge a.
Drones nwere ike ịbụ isi ihe maka mmepe nkenke oliv
Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime ihe ọkụkụ nke Andalusia na-akụ nzọ kachasị bụ ngalaba ...
Snapchat adịworị na njedebe ikpeazụ nke ịmepụta ụgbọ ya
Mgbe ogologo oge echere, ọ dị ka ụlọ ọrụ Snapchat mechara nwee drones ọhụrụ ọ fọrọ nke nta ka ọ dịrị njikere.
Ndi agha ndi mmadu nke ndi China na egosiputa kamikaze drones ohuru ha nwere nke nwere obere bombu nke di egwu na nke mbu.
A ga-eji ụgbọ mmiri Spanish na-ejighị ụgbọ mmiri rụọ ọrụ maka nnapụta na United States
A ga-eji ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ kpamkpam, nke ụlọ ọrụ Spanish Singular Aircraft rụpụtara na United States maka ndị ọrụ nnapụta.
Jikọọ Robotics gosipụtara ike nke drones ya
Jikọọ Robotics bụ ụlọ ọrụ Portuguese nke tọrọ ntọala na 2015 site n'aka Eduardo Mendes na Raphael Stanzani nke jisiri ike banye ...
Ndị agha Spanish na-anwale usoro ọhụụ nwere ike ịgbatu drones n'etiti ụgbọ elu
Dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ, ndị agha Spanish na-ata ahụhụ nke ukwuu iji chebe ntọala ya na Mosul megide ...
Endesa ga-eji helikọpta na drones nyochaa ihe karịrị puku kilomita anọ na Andalusia
Endesa ka kwuputara na na nke mbụ ya na Andalusia drones, a ga-eji nyocha nke usoro ọkụ na ọkara dị elu.
Amazon ugbua na-eche echiche banyere otu esi ledoo ndị ahịa ya site na nnyefe drones ya
Amazon ka tinye akwụkwọ maka patenti ọhụrụ nke drones ya, mgbe ọ na-ebunye ngwugwu, ga-enwe ike ịnakọta data ndị ahịa.
Ihe oru ngo a buwanye ibu choro inyere ndi na-acho ugbo ala aka
Na Mahadum Polytechnic nke Madrid, a na-atụ anya na, site na eziokwu dịwanye elu, ndị ọrụ drone nwere ike inyere aka na ọrụ ha.
Murcia ga-enyocha oke ọhịa ya site na enyemaka nke drones
Murcia bụ otu n'ime obodo ndị ahụ, mgbe ha bupụsịrị ụfọdụ mmemme metụtara teknụzụ ọhụụ, ọ dị ka ...
Tactical Missiles Corporation na-arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke drones supersonic
Tactical Missiles Corporation ka ekpughere na ọtụtụ akụ nke ụlọ ọrụ ya na-arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke drones supersonic.
Nke a bụ aeromoto nke Scorpion-3 gosipụtara
Scorpion-3 ka jiri ohere MAKS 2017 mba ofesi gosipụta hoverbike ọhụrụ ya.
Ndị agha US na-arụ ọrụ na laser iji gbatuo drones
Navy ndị United States amalitela ọrụ na imepụta ngwa agha laser 100 kW nke nwere ike ịgbatu drones, ụgbọ elu, na ogbunigwe.
Ndị NASA kwuru na n’oge na-adịghị anya ị ga-ebido ịkpọ ụda ụda drones asị
O doro anya na dịka ọrụ kachasị ọhụrụ nke NASA bipụtara, ụda nke mmiri ọ bụla na-ewe iwe na-ewe iwe karịa nke ụgbọ ala ọzọ.
Drones ndị nwere laser iji nyochaa ikuku ndị na-emetọ ihe
Otu oru ngo nke otu ndi oru nyocha sitere na Institute of Standards and Technology na mmekorita ya na ...
ParaZero SafeAir, parashute maka drones azụmahịa
Ọ bụrụ na ị na-mgbe drone a drone ma ọ bụ ziri ezi na nso onye n'ihi na onye ọ bụ ihe mbụ ha ...
JAXA na-eziga drone na International Space Station
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka njirimara niile nke ụgbọ mmiri ọhụrụ JAXA zigara na International Space Station.
DLR RacerX, nke kachasị ọsọ n'ụwa
Mgbe ọ rutere ọsọ ọsọ nke 288 kilomita kwa awa, DLR RacerX edepụtara dị ka ngwa ngwa kachasị ọsọ na mbara ala.
DJI chere ihu na obodo a raara nye hacking ya drones
DJI bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ ejirila kpọrọ ihe na-ekweghị ka onye ọ bụla ...
MIT na-eme ka o kwe omume ịmepụta drones nke ụmụ ahụhụ
N'ihi nnukwu ọrụ ikpeazụ nke usoro injinia na ndị nyocha si MIT bipụtara, taa anyị nwere ike ikwu maka ...
Gini na adighi igbanye ugwo ugbo eletrik gi na drone?
Darko Darmar Markovic, onye na-ese ihe na Serbia, na-enye ụzọ na-adọrọ mmasị iji kwụọ ụgbọ ala eletrik na ọdụ ọ bụla na-adọba ụgbọala.
Nke a bụ otú onye na-ahụ maka ụgbọelu si eme njem mgbe ụgbọelu na-anya ụgbọelu
Wherebanye ebe m chọrọ igosi gị vidiyo ebe ị nwere ike ịhụ ihe na-eme mgbe obere ụgbọelu wakporo ọdụ ụgbọ elu echedoro.
Israel nwetara drones nke eji egbe egbe agha maka ịlụ ọgụ n'obodo
Duke Robotics bụ ụlọ ọrụ America na-ahụ maka mmepe na nrụpụta nke drones ndị agha ga-abata n'Izrel n'oge na-adịghị anya
National Geographic na-ebipụta foto kacha mma ejiri drones na 2017
Dị ka afọ ọ bụla National Geographic ka bipụtara foto ikpeazụ nke 12 nke mbipụta 2017 kachasị mma foto ...
Dubai ga-amalite ọrụ tagzi nke drone na July a
Dubai ga-abụ obodo izizi n’ụwa nwere ọrụ ịnya ụgbọ ala nke nwere ike ịkpọga ndị njem n’ime.
Na Spain ọ ga-esiri ike ịhụ drones na-ebunye ngwugwu n'ụlọ
N'ihi nsogbu nke teknụzụ ọhụụ dịka drones nwere ike ibute, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume ha ịbunye nchịkọta.
Russia ga-abụ ike izizi n’ịrụpụta drones ndị agha
Dika okwu ohuru nke osote onye isi ala nke Russia, Dmitri Rogozin kwuru, o doro anya na ndi ndu obodo abughi nani ...
Ndị uwe ojii ga-enwe ike ịchọpụta ụgbọ mmiri ọ bụla na-efe efe
Ekele maka usoro ihe ọhụrụ a nke emepụtara na United States, onye uwe ojii ga-enwe ike ịchọpụta ihe ọ bụla ụgbọ mmiri na-agba n’etiti ụgbọ elu.
UNICEF na Malawi ịmalite usoro mmemme ọhụrụ
N'ihi mmekota nke UNICEF, Malawi ga-abụ onye izizi n'ime Afrịka niile nwere ọdụ corneọd na-arụ ọrụ nke ọma.
Facebook na-ekwuputa mmezi nke mmiri nke ga-aga ịntanetị gaa mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ
Facebook ka kwuputara na netwọkụ mmekọrịta ya na ọganihu ndị pụtara ìhè na ọ nwalere nke ọma na ọrụ Internetntanetị ya maka ụwa niile.
Drones megide igbukpọsị osisi anyị
Susan Graham bụ onye injinia nke mepụtara usoro kwụ ọtọ maka drones iji nwee ike ịkụ osisi kpamkpam n'ụzọ kwụ ọtọ.
MIT na-egosi anyị ọhụụ ọhụrụ na nke pụrụ iche nwere wiil
MIT na-emepe emepe ọhụrụ nke drones nwere ike ịgagharị na ala ma ọ bụ na-efe efe dabere na ọnọdụ ndị gbara anyị gburugburu.
China gosiri anyị ihe mbụ laser nwere ike ịgbatu drones na etiti ụgbọ elu dị ka
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta sitere na Mahadum China nke Injinịa Injinịa ka rụpụtara laser nwere ike zuru oke iji gbaa drones.
United States na-arụ ọrụ ugbu a na drone nwere ike ibibi akụ ụta
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka drone ọhụrụ a na-emepe na United States, otu nwere ikike ịgbatu ngwa ọgụ dị n'etiti mba ọzọ.
European Union chọrọ ịnwe iwu maka drones njikere n'ime afọ abụọ
European Union ka kwuputara na ha ga-ekenyekwu akụ iji nweta iwu ọhụrụ maka drones dị n'ihu 2019.
Inwe drone na-eweta ngwugwu n'ụlọ gị enweela ike na China
JD.com bụ ụlọ ọrụ China nke taa amalitela inyefe ndị ahịa ya ngwugwu site na iji drones dị iche iche.
Drone Hopper meriri '2017 Aeronautical Innovation Award' site na oru ohuru ya
Enyerela Drone Hopper 2017 Aeronautical Innovation Award maka ọrụ ya na-emepe drone nwere ike inye aka ịkwụsị ọkụ.
Volocopter enweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ule na Dubai
Volocopter, ihe kwụụrụ onwe ya na-arụ ọrụ tagzi, mechara nweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji bido nyocha ule na obodo Dubai.
Airbus nwalere helikọpta kwụụrụ onwe ya
Airbus ka juru anyị anya site na nkwupụta mgbasa ozi ọhụụ ebe ha gwara anyị otu ha sirila nwalee helikọpta kwụ ọtọ ha.
Otu drones ga na-ahụ maka nchọpụta mmanụ wụfuru n’elu oke osimiri
Otu ìgwè ndị nyocha si Mahadum Cartagena nọ na-arụ ọrụ na sistemụ kwụụrụ onwe ya iji chọpụta mwụfu mmanụ.
Drones iji gbochie oke ọkụ ọkụ
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta na-arụ ọrụ na imepụta usoro maka igbochi ọkụ ọkụ site na iji drones.
Drone hụrụ n'anya? Ndị a bụ akaụntụ Instagram ị kwesịrị ịgbaso
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ọtụtụ n'ime profaịlụ Instagram kachasị mma iji mụta usoro foto foto.
Airbus na-arụ ọrụ ugbu a na usoro ọhụrụ nke drones nwere ike ibudata ụgbọ mmiri
Airbus ka malitere oru ohuru na Singapore nke enwere ike ibuputa ugbo mmiri ma budata ya ozugbo.
Snapchat zụtara ụlọ ọrụ drone
Site ugbu a, anyị niile ga-ama Snapchat, ụlọ ọrụ rụzuru ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume n'oge a ...
Na Hungary ha na-akuzi drones ịchụ nta dị ka wolf
Ndị ọkà mmụta sayensị nọ na Hungary ewepụtala algorithm nke nwere ike i ofomi omume nke mkpọ wolves.
Lọ egwuregwu Swift na-enye gị ohere ịwepụta rọbọt, drones, na ọbụna ngwa egwu
Egwuregwu Swift bụ ngwa free dị na Storelọ Ahịa Play site na nke ị nwere ike ịme robot, drones na ngwá egwu n'onwe gị.
Drones nwere ike ịkwalite ọrụ nke 061
Site na mpaghara Jaén, anyị na-enweta ozi banyere etu ndị agha mberede dịka 061 na-amalite iji drones.
Drones sonyere na ọgụ megide anwụnta agụ
Ndị ọkachamara na-amalite iji drones na ụsụ iji chịkwaa ma kpochapụ ihe otiti nke anwụnta agụ na-emebi mpaghara Mediterranean.
Nke nta nke nta, ojiji ọhụrụ maka drones na-apụta, yana echiche ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ pụtara na ahịa ...
DJI Spark, nke dị obere, dị ọnụ ala ma nwee ike karịa
DJlọ ọrụ DJI nwere nnọọ ihe ijuanya na ngosi nke DJI Spark ọhụrụ, obere na-adọrọ mmasị na mmiri na-atọ gị ụtọ.
Amazon malitere iche banyere ihe egwu nwere ike ịpụta site na drones azụmaahịa ya
Ọ bụ ezie na enweghi iwu na-achịkwa ha, Amazon gara n'ihu na-arụ ọrụ na mmepe nke drones maka nnyefe ngwugwu.
DJI na-ekwu maka ikpo okwu ọdịnaya ya ohuru
DJI ka kwupụtara ọhụụ nke ikpo okwu vidiyo ọhụrụ ebe onye ọrụ ọ bụla nwere ike bulite vidiyo ha ma gosi ha ụwa.
Ministri nke ime obodo agaghị eji drones nyochaa ókè ala ya
Minista nke ime obodo mechara kpebie ịghara iji drones nyere aka na nyocha nke ngbasa ókèala Ceuta na Melilla.
Airbus Aerial, ngalaba ohuru ohuru nke oru ahia na drones
Airbus Aerial bụ nkewa ọhụrụ nke Airbus aerospace kere iji nwee ike ịnakọta ma nyochaa ihe oyiyi na data na drones.
A ga-alụ agha azụmaahịa ọzọ n'igwe anyị
Nnukwu mba dị iche iche na-achọ ịzụlite ngwaahịa ha iji kwadebe maka agha azụmahịa ọzọ na-esote.
Nke a bụ otú ụwa si ele anya n’azụ igwefoto nke ọtụtụ drones
Ntinye ebe m chọrọ igosi gị vidiyo dị iche iche edere na drones ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ, site na nnụnụ anya, ebe kachasị mma n'ụwa.
Edgybees ga - eji ihe egwuregwu dị mfe wee meziwanye ụgbọ mmiri gị.
Edgybees bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwanrọ ngwanrọ dị mfe ma dịkwa mma nke ị ga - eji nwee ọ yourụ na DJI drone gị.
DJI weputara Mmelite iji gbochie Drones ya na-efe efe na Syria na Iraq
Na-ekwuputaghị ntọhapụ nke mmelite ọhụrụ, DJI nwere sọftụwia nwere sọftụw drones ya niile ka ha ghara ife efe na Iraq ma ọ bụ Syria.
NTT Docomo na-egosi anyị onyinye amara ya maka ire ahịa na mgbasa ozi
NTT Docomo ka juru anyị anya site na echiche na-adọrọ mmasị nke na-eme drones ndị mmekọ zuru oke maka ụlọ ọrụ ahịa.
Larry Page nwere mmasị n'ụgbọ ala na-efe efe nke ọdịnihu
Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị raara nye mmepe nke ugbo ala na-efe efe maka mmadụ nke Larry Page tinyere ego, na-egosi anyị nnukwu nnabata.
DJI Ugogbe anya, iko iji fee drones na onye mbụ
DJI Goggles, ihe ngosi ohuru maka drones nke a ga - enweta na ahịa site na May 20 maka 549 euro.
Nwa okorobịa ahụ bụ Nikodem Bartnik jisiri ike jiri Arduino rụọ ụgbọ mmiri a na-arụ n'ụlọ, akụrụngwa nke anyị ga-ewuliri onwe anyị elu site na akwụkwọ mgbasa ozi ya ...
Air Robotics bụ ụlọ ọrụ izizi nke ụwa iji nweta ikike iji ụgbọelu kwụrụ onwe ya drones
Air Robotics bụ ụlọ ọrụ mbụ iji nweta ikikere site na nchịkwa iji jiri ọrụ ngo ya na-arụ ọrụ nke ọma.
DJI Phantom 4 Advanced, na - eme ka igwefoto gị dị mma ma na - ebelata ọnụahịa ya
DJI juru anyị anya na mwepụta nke Phantom 4 Advanced, ọhụụ ọhụrụ nke ga-adị na ahịa na Eprel 30.
UEFA dị na njikere maka mwakpo drone nwere ike na njedebe nke Njikọ Njikọ
Na UEFA, ha na-atụ egwu na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na drones nwere ike ime n'oge emume nke Njikọ Njikọ ikpeazụ.
Spain nwere ike ịmalite iji drones iji chebe ókèala mba ahụ
N'ihi ọrụ Surveiron, ókèala Spanish ga-enwe ike ịtụkwasị obi na drones iji rụọ ọrụ nyocha na ọrụ nchedo
Jingdong kwupụtara ọkwa nke ọdụ ụgbọ elu 150 maka drones
Jingdong, onye China bu nnukwu e-commerce buru ibu mara ọkwa na n'ime afọ atọ ha ga-arụ ọdụ ụgbọ elu 150 maka drones.
Canon na-arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke onwe ya
Mgbe ha wetara igwefoto ha kachasị ọhụrụ n'ahịa, Canon mechara kpebie ilekwasị anya na ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri na-enweghị atụ.
Na Switzerland ha na-amalite iji drones nyefee ihe nyocha ụlọ
Ọtụtụ bụ oge nke drones, nke ndị ọkachamara dabara nke ọma, nwere ike ịnye ọrụ na ...
Yuneec na-ekwuputa ọkwa ọhụrụ
Yuneec bụ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ metụtara ngalaba nke drone na, mgbe ọ gbasasịrị mba ụwa, na-ekwupụta layoffs n'akụkụ ụfọdụ nke ndị ọrụ ya.
Nke a bụ otú SEAT kwenyere na drones nke ọdịnihu ga-adị
SEAT, ụlọ ọrụ amaara n'ụwa niile maka imepụta na imepụta nke ụgbọala, na-egosi etu ha si kwenye na drones nwere ike iru ụlọ ọrụ ha.
Ndị uwe ojii na United States nwere ike iji drones ndị agha
United States enweela ọtụtụ obodo ebe a na-atụle nhọrọ nke ndị uwe ojii nwere ike iji drones ndị agha.
A na-etinye Delsat International Group na ọdụ ụgbọ elu nke Teruel
Elstù Delsat International Group na-ekwupụta mmeghe nke ụlọ ọrụ ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Teruel maka nkewa ya.
Amazon Primer Air, otu nzọ dị nso iji bụrụ eziokwu
Mgbe ọtụtụ arịrịọ na nchere gasịrị, Amazon mechara nwee ike izu ụka a iji nwalee ọrụ Prime Air na ala US.
N'ihi ọrụ a, ọtụtụ drones ga-arụ ọrụ ọnụ
N'ihi oru ngo nke ọtụtụ ndị nyocha na Mahadum Zurich rụrụ, ọtụtụ drones nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a.
Nke a bụ atụmatụ nchekwa iji mesoo ISIS drones na Iraq
Ministri Nchekwa nke Spain na-achọ ụzọ iji nweta ma debe ọta elektrọnik na ntọala Besmayah.
Huawei na-arụ ọrụ na sistemụ nke na-ebu drones n'ụgbọ elu
Huawei na-egosi anyị ikpo okwu zuru oke iji chaji batrị nke drones anyị na-enweghị ha ịkwụsị moto ha.
Russia ugbua nwere ngwa agha nwere ike igbochi mmiri ọ bụla
N'ihi ojiji nke ihe agha ahụ nke karịrị 3,5 nde dollar ejiri mee ka ọ dị mfe ...
Gladius bụ mmiri mmiri nwere ike ịdekọ na ogo 4K
Gladius bụ ụgbọ mmiri okpuru mmiri pụrụ iche nwere ike ịdekọ yana ogo ruru 4K ma banye na omimi nke ruru 100 mita.
Arcelor Mittal na-achọ drones autonomous na ụlọ ọrụ ya
Arcelor Mittal, n'oge nzukọ ya na ụlọ ọrụ ndị dị na mpaghara ahụ, ka kwuputara na ọ na-achọ ndị mmekọ iji mepụta drones autonomous maka ụlọ ọrụ ya.
DARPA SideArm, oru ngo iji nweta drones ka ha rutere na mita ole na ole
DARPA ka gosiputara ọha na eze ihe ha kpọrọ SideArm, ogwe aka dị iche iche nke nwere ike ijide nku drones n'etiti ụgbọ elu.
Interceptor nke ikuku, nke nwere ike ichoputa ma kwado ndi ozo
Airspace Interceptor bụ ihe ọhụrụ nke ụmụ okorobịa na Airspace kere, otu ngalaba nwere ike ịchọpụta ma gbochie ndị ọzọ drones n'etiti ụgbọ elu.
Ha na-agbatu obere drone nwere ngwa agha Patriot
Ndị Allies nke United States Army gbagburu 200-euro drone site na iji ngwa agha Patriot nke ọnụ ahịa ya ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde dollar 3,5.
Mmiri a na-eguzogide ụdị egwu dị iche iche
Site na Polylọ Akwụkwọ Federal Polytechnic nke Lausanne ha na-enye anyị ụgbọ mmiri pụrụ iche nke nwere ike iguzogide ụdị ọghọm ọ bụla ma ọ bụ ịfụ.
DroneShow, ihe omume metụtara ụwa nke drone a ga-eme na Catalonia
DroneShow bụ ihe ngosi izizi metụtara ụwa nke drones nke a ga-enwe na Catalonia, ihe omume anyị na-akwado ileta.
Dịka nkwupụta ụfọdụ si kwuo, o doro anya na Trump enyela ikike CIA ka ọ rụọ ọgụ drone mgbe ha chere na ọ kwesịrị ekwesị.
Indra na-ekpughe nkọwa gbasara ọrụ ARMS, nke na-achọ ịchọpụta ma chịkwaa mmiri ọ bụla site na onye nchịkwa ya.
Ha bu n'obi ịkwụsị agụụ na ụwa dabere na drones oriri
Windhorse Aerospace bụ ụlọ ọrụ Bekee nke na-achọ ịkwụsị agụụ ụwa site na ịmepụta drones oriri.
Nke a bụ otu ụlọ ọrụ si anwale drones ha maka nchekwa gị
Techlọ ọrụ Virginia Tech na-eme nnwale dị iche iche na-egosi mmebi nke drone nwere ike ibute ma ọ bụrụ na ọ dakwasị ihu mmadụ.
Ndị a bụ drones nke ngalaba ọkụ ọkụ New York na-eji
Ogologo oge gara aga anyị nwere ohere ịchọpụta na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọkụ nke New York nwere mmasị na nyocha ...
Airbus Pop.Up, ụgbọ ala kwurula nke nwere ike ịgafe ikuku
Airbus Pop.Up bu ihe ohuru nke ụmụ okorobịa si Airbus, yana mmekorita ya na ndị ọkachamara Italdesing, gosipụtara na Geneva Motor Show.
Picolissimo, pere mpe ihe eji eme 3D
Picolissimo bụ obere drone n'ụwa, usoro edepụtara maka iji mbipụta 3D.
UPS na-egosi anyị ihe ọ ga - adị ka ya na drones
UPS, site na mmekorita nke ndị ọkachamara na Workhorse, na-egosi anyị mgbanwe ọhụụ nke mmemme ya.
Russian Institute of Aviation Materials na-emepụta engine maka drones site na mbipụta 3D
Ndị injinia sitere na Russia Institute of Aviation Materials jikwaa iji mepụta 3D iji mepụta ma mepụta igwe ụgbọ mmiri.
Project SideArm ma ọ bụ otu esi ejide eriri drones nwere ofu na eriri na net
Project SideArm bu oru ngo nke Aurora Flight Sciences weputara site na DARPA iji weghachite ma malite ugbo elu drones.
GoPro Karma laghachi n'ahịa ahụ mgbe echetara ya n'ihi nsogbu na ụgbọ elu
GoPro ka kwuputara ịlaghachi n'ahịa nke mara mma Karma drone mgbe edozi nsogbu nsogbu ike nke dugara na iwepụ ya.
Nke a bụ ihe ị nwere ike na enweghị ike iji ụgbọ mmiri gị, dị ka EASA si kwuo
Rybanye ebe anyị ga-ekwu okwu n'ụzọ a chịkọtara banyere ihe ị nwere ike na ihe ị na-enweghị ike iji drone mee taa dịka iwu nke AESA.
DronesDirect na-agwa anyị gbasara ọrụ ọhụụ ya, nche anwụ kwụ ọtọ
DronesDirect bụ ụlọ ọrụ Bekee nke na-eme ozi taa taa maka ọrụ nke ị ga-esi chefuo nche anwụ gị n'ụlọ na-enweghị atụ egwu oge.
Onwe onwe ya, otu ụgbọ mmiri ahaziri iji wepụta onwe gị
Selfly bụ ụgbọ elu na-efe efe nke otu ndị injinia haziri site na ebumnuche iji were ụdị onwe dị iche iche.
Ihe oru a ga - enyere gi aka iji mpempe LEGO wuo nke gi
N'ihi ọrụ a dị mfe ma dị ọnụ ala nke ebipụtara na Kickstarter, ị ga-enwe ike iji aka gị mee mpempe LEGO.
VA001 na-agbaji ndekọ ndekọ ụgbọ elu ụwa
N'oge a, dịka mmepe na nyocha na mpaghara teknụzụ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ekwesịghị naanị ...
Ngwongwo kaadiboodu ndi nwere ike iwepu ihe di nma maka ikwuputa ogwu
DARPA na-agwa anyi gbasara oru ohuru ohuru nke o choro iji meputa kaadiboodu drones, dika imaatu, nye ndi ogwu.
Ugbo ala nke Airbus ga-ebido ule ubi ha n'afọ a
Airbus na-ekwusi ike na mmemme ya maka mmepe nke tagzi ikuku ga-adị njikere ịrụ nyocha mbụ na njedebe nke afọ a 2017.
Nke a bụ oke egwu ikuku ikuku nke mmiri na-emepụta
NASA, mgbe ọmụmụ emere na DJI drone, na-egosi anyị na vidiyo ikuku ikuku nke ọ nwere ike ịmị.
DV WING, bụ naanị otu ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ ugbo
Ihe ngosi DV WING bu ihe ohuru kachasi nma nke ndi Drone Volt haputara ma bu n'obi ka ha buru oru ugbo.
Google kagburu ọrụ mmepe ya
Google ka kwuputara site na nkwupụta ọkwa mkpebi nke ụlọ ọrụ ahụ imechi ọrụ ya niile metụtara drones.
Nke a ga - abụ drones ndị agha ọhụụ nke ọdịnihu
Perdix bụ aha nke United States Army ji mee ndị agha ọhụrụ drones ya.
Parrot gbara ndị ọrụ 290 nke ngalaba drone ọkụ
Parrot ka tọhapụrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akpọsa ụlọ ọrụ nhazigharị nke ga-eme ka mmadụ 290 pụọ n'ọrụ.
Xpeller, ngwaọrụ mgbochi drone mepụtara site na Airbus
Xpeller bụ aha n'okpuru nke Airbus gosipụtara mmepe ọhụụ ya, ngwaọrụ mkpanaka mgbochi ọhụụ ọhụrụ, na CES 2017.
Uvifi Draco, nke nwere ike inweta mmadụ niile
Draco bụ aha nke ụmụ okorobịa si Uvifi mere baptizim ọhụrụ ha nke eji eme ụdị agbụrụ niile.
Flyt 16, nke nwere ike ibu mmadụ
Flyt 16 bụ echiche nke tagzi drone nke ụmụ okorobịa si Flyt Aerospatial jisiri ike mejuputa, ihe ngosi izizi nke na-egosi ezigbo nkwa.
GRIFF 300, multirotor nwere ike ibu ihe ruru kilogram 225
Ọ bụrụ na ị hụrụ onye drones n'anya ma ọ bụ chọrọ otu ngalaba nwere ike ibu ibu zuru oke iji kwafee ya ...
Yi Erida, ụgbọ elu nke ụwa na-agba ọsọ ọsọ ga-ada ahịa na Jenụwarị
Mgbe egosiri igwefoto ọhụụ ọhụụ, Xiaomi na-enyefe ọfụma ọhụrụ ya nke a mere baptizim dị ka Yi Erida.
Amazon drones ga-enwe ikike ịchụ akụ
Nke nta nke nta site na Amazon anyị na-enweta nkọwa ndị ọzọ gbasara mmepe nke drones onwe ya, nke nwere ike ịchụ akụ.
Xiaomi Yi 4K +, igwefoto ihe ọhụụ ị ga-achọ
Ọ bụrụ na ị na-achọ igwefoto ihe ọhụụ maka mmiri gị, ị ga-enwe mmasị na njirimara niile na ọnụahịa nke ọhụrụ Xiaomi Yi 4K +.
Cheb'obi gị drone si oyi a Christmas na a mara mma sweta
O doro anya na ejiji kachasị ọhụrụ maka drones rutere Spain, chebe ha pụọ ​​n'oge oyi site na ịkwado ha sweta dị ka nkịta n'oge ụbọchị ndị a.
Nrụrụ aka ga-eme ka anyị nwee ike ịmepụta drones nwere ike ife efe dị ka nnụnụ
Ndị ọkà mmụta sayensị si Polylọ Akwụkwọ Federal Polytechnic nke Lausanne jisiri ike ịmepụta usoro nku nke nwere ike iji ụgbọelu na-efe efe dị ka nnụnụ.
7-iri na otu, ụlọ ọrụ ndị nyeferela ọtụtụ ngwugwu ngwongwo ruo ugbu a n'ụwa
7-iri na otu bụ otu ụlọ ahịa na United States nke taa jisiri ike mee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị ngwunye ngwongwo na drones.
Vodafone chọrọ ka ọ bụrụ ọrụ maka njikwa ụgbọelu ụgbọelu
Vodafone bụ otu n'ime ndị aga-ahọpụta ka ọ bụrụ onye isi nke njikwa ụgbọ elu drone na Europe dum.
Mụta ihe n'ụzọ zuru ezu banyere mmemme ọhụụ Ubudrone-Talent nke Mahadum Burgos mebere
Mahadum Burgos ka tọhapụrụ nkọwa niile dị na mmemme ọhụụ nke Ubudrone-Talent.
Airbus chọrọ ịbụ akara aka na ahịa drone
Airbus nwere mmasị ịbanye n'ahịa azụmaahịa azụmaahịa na, maka ọrụ a, ha mepụtara nkewa ọhụrụ n'okpuru aha DroneLab.
Amazon Prime Air na-amalite ịmalite nzọụkwụ mbụ ya
Ka ọ dị ugbu a, anyị ji n'aka na anyị niile maara ka ụlọ ọrụ nke ogo Google, ọ bụ ezie na ọ bụ taa ...
ScaraBot X8, octocopter pụrụ iche
Banye ebe anyị ga-ekwu maka njirimara na njirimara niile dị na ScaraBot X8 ọhụrụ, octocopter modular ọhụrụ.
MIT mepụtara mmemme ka ị nwee ike chepụta onwe gị
Ndị na-eme nchọpụta na MIT ewepụtala sọftụwia dị mfe iji rụọ ọrụ nke ị nwere ike iji mepụta onwe gị naanị mmiri.
Ndị Sky Guys na-eweta drone nwere nnwere onwe karịrị 24 awa
Ndị Sky Guys bụ mmalite nke Canada nke webatara DX-3, nke nwere ike ịfe efe karịa awa 24.
DJI kwupụtara mmezi dị oke mkpa na SDK ya
N'oge ogbako ikpeazụ nke DJI haziri na San Francisco, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara ịmepụta SDK ọhụrụ nwere arụmọrụ na ike ka ukwuu.
DJI na EENA bịanyere aka na nkwekọrịta iji jikọta drones na ọrụ nnapụta
DJI ka bịarutere nkwekọrịta mmekorita ya na EENA iji mepụta ọrụ ebe drones nwere ike ịmekọrịta na ụdị nnapụta niile.
DroneGun, a bazooka ka igba ala drones
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka DroneGun, n'ụzọ nkịtị bazooka nwere ike ịkụtu ụdị ụdị mmiri ọ bụla na-arụ ọrụ n'ụdị ụdị ọ bụla.
Novadrone Nomad, ụgbọ mmiri ọhụrụ multidisciplinary na-akụ ahịa
Novadrone ka gosipụtara Nomad, ihe ọhụrụ multidisciplinary drone nke e mere na mpaghara ndị ọkachamara nwere atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị.
HEMAV nwetara nde euro 3 na agba mbu ya
HEMAV, onye mbido Spanish nke nwere drones, jisiri ike bulie ihe ruru ihe ruru nde euro atọ na nke mbụ nke itinye ego.
Ihe omume 38 E384, otu drone nwere ike ikpuchi ihe ruru hectare 800 n'otu ụgbọ elu
Emume 384 nke E38 na-agbanwe agbanwe ka ọ nata mmelite nke na-enye ya ohere ịdebe ihe ruru hekta 800 n'otu ụgbọ elu.
DJI AGRAS MG-1S, bụ drone ezubere ịrụ ọrụ ugbo
DJI ka gosiputara ndi mmadu ihe ohuru ohuru emere maka oru ndi ozo, ihe nlere dika DJI AGRAS MG-1S.
Tactical Robotics 'drone-taxis na-eme nke ọma ule mbụ ha
Mgbe ogologo oge nke mmepe na ọrụ, ụlọ ọrụ Tactical Robotics mechara nwee ike nwalee tagzi drones ya na nyocha ubi.
AeroVironment Quantix, ngwakọ ndị ị ga-achọ
AeroVironment ka kwuputara mkpọsa ahịa nke Quantix, ụgbọelu kwụ ọtọ nke edobere iji chịkọta data maka ahịa ọkachamara.
UNHCR amalitela iji drones enyere ndị gbara ọsọ ndụ na ndị gbara ọsọ ndụ aka
UNHCR ka kwuputara na, iji nyere ndị gbara ọsọ ndụ na ndị gbara ọsọ ndụ na ndịda Sudan aka, ha ga-ebido iji drones afọ ofu.
AgPixel na agX Platform sonyeere ike inye ezigbo ọrụ maka ọrụ ugbo
AgPixel na agX Platform, ụlọ ọrụ abụọ raara onwe ha nye iji mepụta ma mepụta drones maka ihe a maara dị ka nkenke ugbo, abanyela ọnụ.
AirSelfie, a drone e mere iji selfies
AirSelfie bụ drone dị ka nha ka ekwentị mkpanaaka nke emepụtara maka ịme selfies.
Spain mechara nwee ike ịnabata otu ule Drone Champions League
Ozugbo ebipụtara ntọala nke Drone Champions League ọhụrụ, ha na-achọ ebe ha ga-eme nyocha ahụ ma otu ga-akwụsị na Spain.
Disney ga-ekeputa ihe ngosi abalị site na iji 300 drones na ọzụzụ
Disney na Intel arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ihe ngosi abalị na-adabere na drones arụkọ ọrụ na ọkụ.
Ndị a bụ atụmatụ niile dị na DJI Phantom 4 Pro ọhụrụ
DJI Phantom 4 Pro bụ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ kachasị ewu ewu na ahịa nke ụlọ ọrụ China, ụgbọ mmiri pụrụ iche pụrụ iche nke nwere teknụzụ ọhụụ.
Mara DJI Inspire nke ohuru 2 ka nma
DJI weputara nkwuputa ndi oru nta akuko ebe o na ekwu okwu banyere ihe ohuru nke DJI Inspire 2, ndi okacha amara nke ndi oru vidiyo.
Onye America na-achọpụta na nwunye ya ekwesịghị ntụkwasị obi nye ya na drone
Onye America, mgbe ọmalitere obi abụọ banyere ikwesị ntụkwasị obi nke nwunye ya n'ihi mgbanwe ụfọdụ ọ chọpụtara na ...
MMC F6 Plus, drone nwere ike iguzo na DJI Matrice 600
The MMC F6 Plus bụ ọhụrụ drone ulo oru site na Chinese ụlọ ọrụ MicroMultiCopter Aero Technology ike ịnagide Onye pụrụ ime ihe nile DJI Matrice 600.
Walkera AiBao, nke nwere mmiri nke nwere teknụzụ kachasị ọhụrụ na mebere ma bụrụ eziokwu
Banye ebe anyị ga-ekwu maka Walkera AiBao ọhụrụ, bụ drone nke nwere teknụzụ dịka eziokwu nke eziokwu na eziokwu gbakwunyere.
Google kwụsịtụrụ ọrụ ya nke ọma nke drone n'ihi nsogbu ego
Google ka kwụsịtụrụ Project Wing nwa oge ya n'ihi ụfọdụ nsogbu ego nke ụlọ ọrụ ahụ nwere taa.
GoPro na-echeta Karma mgbe ọ chọtara nsogbu ike na ụgbọ elu
GoPro ka kwupụtara mkpebi ịhapụ Karma drone ya na ahịa maka oge ahụ mgbe ịchọtara ọtụtụ nsogbu ike na etiti ụgbọ elu.
Ọdụ ụgbọ elu Dubai dị ugbu a na-anwale ndị nyocha mbụ ya
Ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọ elu Dubai International ka kwupụtara na taa a na-anwale ọtụtụ ndị na-achọpụta drone n'ime ogige ahụ
Nke a nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ enyemaka ala maka drones, dị ka otu ìgwè nke ụmụ akwụkwọ UPV
Otu ìgwè nke ụmụ akwụkwọ UPV na-egosi anyị otu ha nwere ike isi lee anya na ọbụnadị usoro iwu nke ọdụ enyemaka ala maka drones.
UPM na-emepụta ngwanrọ ka mmiri ọ bụla nwee ike ịchọpụta ọkụ
Otu ìgwè ndị mmepe sitere na UPM ka gosipụtara sọftụwia nke ọ bụla ụgbọ mmiri ọ bụla nwere ike iji chọpụta ọkụ.
Egatel gosipụtara usoro nkwukọrịta ọhụrụ ya maka drones
Egatel, ụlọ ọrụ Spanish nke dị na Galicia, ka gosipụtara usoro nkwukọrịta mgbochi mgbochi maka naanị drones.
DCNS na Airbus ga-arụ ọrụ ọnụ na mmepe nke usoro UAV ọhụrụ
Airbus ka soro DCNS nke France soro rụọ ọrụ ọnụ na imepụta ụdị ụgbọ ala kwụ ọtọ.
Jonathan Anderson na-emepụta usoro nke nwere ike ịpị ihe mgbaàmà nke ụgbọelu ọ bụla mgbe ọ na-efe
Jonathan Anderson, ọkachamara nchekwa na Trend Micro, jisiri ike ịmepụta usoro nke nwere ike ịpị akara akara nke ụgbọ mmiri ọ bụla.
Tech Guaraní na-arụpụta ụgbọ mmiri nke mbụ edepụtara na Latin America
Tech Guaraní bụ ụlọ ọrụ izizi na Ibero-America niile nwere ike imepụta drones na-achọ iji teknụzụ obibi 3D.
Na Avilés, ha ga-eji drones jikwaa ntinye nke ngwongwo n'ọdụ ụgbọ mmiri ha
Site n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Avilés ka ekwuputara na site ugbu a gaa n'ihu, ha ga-eji drones na-achịkwa ngwaahịa niile na-abata.
Unión Fenosa enyochala ihe karịrị kilomita 1.300 nke akara ike na drones
Unión Fenosa na-ekwuwapụta na ha enyochala ihe karịrị kilomita 1.300 nke usoro ike na drones na mpaghara Galicia naanị.
Amazon na-egosi anyị eserese mbụ nke minidron ya nwere ike ịchọta ụmụaka
Amazon na-egosi ihe osise mbụ nke patent ya na minidron nke nwere Alexa nwere ike ịchọ ụmụaka furu efu na gburugburu ebe obibi ọ bụla.
DJI gosipụtara Zenmuse Z30, igwefoto maka mmiri mmiri gị na mbugharị ngwa ngwa 30x
Site na DJI anyị natara nkwupụta gọọmentị na-ekwupụta mwepụta nke Zenmuse Z30, igwefoto ọhụrụ maka drones na 30x optical zoom.
Na ndagwurugwu Estós, ndị ọzụzụ atụrụ na-eji drones enyocha anụ ụlọ ha
Na ndagwurugwu Estós, nke dị na Pyrenees nke Aragonese, a na-arụ ọrụ ebe a ga-emepụta ụgbọ mmiri ọhụrụ nwere ike ilekọta anụ ụlọ.
Sweden na-amachibido vidio vidiyo maka ojiji nkeonwe ya na drones
Lọikpe Kasị Elu nke Sweden amalitela iwu na-egbochi iji drones edekọ vidiyo maka ojiji nkeonwe.
Sọftụwia a ga - enyere gị aka iji ụgbọ elu gị rụọ ọrụ ọtụtụ awa na-enweghị mkpa mmanụ
ALOFT bụ sọftụwia ọhụụ nke Laboratory Research Naval mepụtara nke nwere ike ime ka ụgbọ mmiri gị daa ọtụtụ awa na-enweghị ike batrị.
Atomic Lab ga-arara, maka otu ụbọchị, iji mepụta aka na-akwụ ụgwọ n'efu
Atomic Lab ka kwuputara na, maka ụbọchị ọrụ zuru oke, ha ga-arara onwe ha nye ịme aka n'efu.
US Air Force gbanwere F-16s ochie ya na drones
Otu ebumnuche nke United States Air Force maka afọ ole na ole sochirinụ bụ n'ụzọ imeziwanye ...
Airblock, ihe eji eme ihe eji eme ihe maka imuta ihe mmemme
Airblock bụ ihe okike kachasị ọhụrụ sitere na Makeblock, ụdị ụdị mmiri dị iche iche emere maka onye ọrụ iji mụta usoro mmemme.
Developmentlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmepe nke Congress na-arụgide EASA ịmepụta iwu maka drones
Ahịa drone bụ otu n'ime amụma kachasị na Spen na ihe niile n'ụwa ...
NVdrones na DroneDeploy bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta ọhụrụ
N'ihi nkwekọrịta nkwekọrịta ọhụrụ a, ndị ọrụ DroneDeploy drone ga-enwe ike iji ngwanrọ nke NVdrones mepụtara.
Valencia, onye ọsụ ụzọ na-eme nnyocha banyere ime obodo na drones
Mpaghara nke Valencia ka malitere oru ohuru site na nke ha choro iji nyochaa dime ime obodo site na iji drones.
Drones dara n'ime ụgbọ elu azụmahịa iji chọpụta ihe egwu dị na ya
Na United Kingdom, ha amalitela ịme ule dị iche iche ebe drones na-asọda na ụgbọ elu azụmahịa iji chọpụta ihe egwu dị na ya.
Ndi na-acho ndi mmadu onwe ha? Gbalịa Hover Camera Passport
Hover Camera Passport bụ drone nke ahaziri ka ọ nwee ike iburu ụdị selfies niile n'ụzọ kwụ ọtọ.
General Electric ga-eji drones chọpụta nchapu gas
General Electric ka kwupụtara ọkwa nke mmemme ọhụrụ nke ha ga-emepe drones akọwapụtara maka ọrụ nchọpụta gas.
Nke a bụ ihe Falcon 8 + dị ka, ụgbọ mmiri azụmaahịa mbụ nke Intel kere
Banye ebe anyị ga-amata Falcon 8 + ntakịrị mma, ụgbọ mmiri azụmaahịa mbụ nke Intel mebere, rụpụtara ma zụọ ahịa.
DJI na-ekwuputa mmekorita ya na Datumate iji nye usoro nlere anya ndi oru
Na nkwupụta gọọmentị nke DJI na Datumate wepụtara, a gwara ya na ụdị abụọ ahụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye usoro onyunyo ọkachamara.
SenseFly eBee, a drone ọkachamara na nkewa na photogrammetry
SenseFly ka kwupụtara ọkwa ahịa nke eBee ọhụrụ, nke a na-eme iji nweta eserese eserese.
NOAA ga-ewepu ozi site na ifufe site na iji drones
NOAA ka kwuputara maka ịmepụta mmemme pụrụ iche ga-arụ ọrụ na mmịpụta nke ozi na ifufe site na iji drones.
Mee ma mepụta usoro mmiri gị nke LEGO maka Flybrix
Site na oru ohuru nke Flybrix, ị nwere ike iwuli ya na ngọngọ LEGO ma dezie koodu isi ha n'onwe gị ọtụtụ oge ịchọrọ.
Otu nwa akwukwo UCAM meputara akuko ngwanrọ nke aka ya drones
José Antonio Rubio López-Atalaya, nwa akwukwo UCAM, egosiputala ihe omuma ihe omuma nke oma maka drones dika oru ngbaputa nke ikpeazu.
Drones ga-adị oke mkpa maka ntinye nke netwọk 5G nke Nokia
Nokia na-ekwuwapụta na taa etinyeworị ya na ntinye nke netwọkụ 5G, ọrụ nke ọ ga-achọ enyemaka nke drones akọwapụtara.
Mee ka ikike nke drone gị dịkwuo ekele maka batrị hydrogen ndị a na-agbanwe
Otu ndị injinia si Mahadum Valladolid jisiri ike mepụta usoro batrị hydrogen nwere ike inye drones nwekwuo ikike
Strategy Analitics na-eme atụmatụ na nnyefe nke mmiri ga-eto 248% na 2016
Na akụkọ ya kachasị ọhụrụ, Strategic Animalitics Strategy nke mpụga, na-ebu amụma na nnyefe nke ngwongwo na ngwugwu na drones ga-eto site na 248% na 2016.
Nokia bidoro nyocha usoro ihe eji achọ ọfụma nke drone
Nokia dị ugbu a mara ọkwa na ha adịla njikere ịnwale usoro nchịkwa okporo ụzọ ha na-emeghe.
Xiaomi abụrụla ụlọ ọrụ nke atọ na ọkwa ụwa nke ndị na-emepụta drone
Mgbe otu afọ nke ihe ọhụrụ na nnukwu rụzuru, Xiaomi mechara jisie ike debe nke atọ na ọkwa ụwa nke ndị na-emepụta mmiri.
Mahadum nke Valencia na-emepụta ụgbọ mmiri mbụ e bipụtara na Spain
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta si Mahadum Valencia jisiri ike mepụta 3D nke mbụ edepụtara nke ọma na Spain.
UPS bidoro mebe nnwale izizi nke inye ya drones
UPS na CyPhy Ọrụ na-enweta ikike ịkwalite ọrụ ha iji mepụta drones akọwapụtara maka nnyefe ngwugwu.
Ndị nyocha si Imperial College London na-achịkwa iji fee ụgbọelu na-efe efe ruo mgbe ebighi ebi
Otu ìgwè ndị nyocha si Imperial College London jisiri ike fefee drone ruo mgbe ebighi ebi na-enweghị mkpa ọ kwadebe batrị.
Prodrone PD6B-AW-ARM, ụyọkọ mmiri nwere ike ibuga ihe
Prodrone PD6B-AW-ARM bụ aha nke ụlọ ọrụ Prodrone mere baptizim na ihe okike ọhụrụ ya, drone nwere ogwe aka nwere ike iburu ihe dị arọ
DelfAcopter, otutu ugbo mmiri nke otutu ndi mmadu meputara site na teknụzụ nka na ụzụ nke Delf
DelfAcopter bu otutu ugbo mmadu nwere otutu ugbo nwere ike iwepu ma rutuo nke oma site na nka na ụzụ nke Delf.
Tomata ihe Aerix VIDIUS dịtụ mma
Ntinye na anyị ga-arara onwe anyị iji mara ntakịrị njirimara niile na ihe minidron dị ka Aerix VIDIUS nwere ike ịnye.
DJI Mavic Pro, mara ihe okike kachasị ọhụrụ nke ọtụtụ mba ndị China
Banye ebe anyị ga-ekwu maka DJI Mavic Pro ọhụrụ, ihe okike kachasị ọhụrụ iji ruo n'ahịa nke mba ndị China DJI.
ESPN na Sky Sports kwupụtara mmasị na agbasa ozi n'agbụrụ drone
Netwọk telivishọn ESPN na Sky Sports ka kwupụtara ọkwa na-eto eto na mmụba ndụ nke agbụrụ agbụrụ.
Cheerson CX10, a obere drone na a igwefoto na ị ga-amasị
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụgbọ ala dị oke ọnụ ma dịkwa obere, ị ga-enwe mmasị na ihe Cheerson CX10 na-enye, ihe nlere anya etinyere igwefoto.
DARPA ga-arụ ọrụ na ntanetị nwere ike nyochaa ọrụ ndị na-eme n'obodo
DARPA ka kwuputara na ha nwere atụmatụ iji mepụta ụdị ntanetị drones nke nwere ike idekọ ọrụ niile ha na-arụ.
Netwọk 4G ga-eme ka ụgbọ elu drones dịkwuo elu
N'oge otu onye na-adịghị ike n'ụwa nke drones, na mgbakwunye na nnwere onwe ya, bụ na ...
Mmiri a na-efe efe na kilomita 241 kwa awa
Stratasys na Aurora Flight Sciences jikọtara ọnụ iji mepụta mmiri mmiri m na-ewetara gị taa, ihe atụ nwere ike iru 241 km / h nke ọsọ ọsọ.
Murcia ga-eji drones nyochaa mmiri Mar Marọ
Murcia ka kwuputara na ha ga-akwadebe ndị otu na-ahụ maka inyocha ihe omume nwere ike ime na Mar Menor nwere drones.
Prodrone na-enye ihe ọhụrụ dị mma maka nyocha nke uko ụlọ na ebe kwụ ọtọ
Prodrone na-enye ihe ngosi ọhụụ ọhụụ emere ya ma rụpụta ya naanị maka nyocha nke ikuku na uko ụlọ.
GoPro na-ewebata Karma ọhụrụ
Mgbe ọtụtụ ọnwa na-eche, leaks na ọbụna igbu oge, akpatre si GoPro ha na eze n'ihu ọhụrụ Karma.
PowerEye na-etu ọnụ igwefoto ọkụ na mkpebi 4K
PowerVision na-enye ihe izizi atụmatụ niile dị na PowerEye ọhụrụ, drone kwadebere igwefoto igwe na mkpebi 4K.
DJI na Epson iji rụkọta ọrụ iji melite Moverio na-agbakwunye iko iko eziokwu
DJI na Epson ka kwupụtara ọkwa nkwekọrịta ọhụụ ọhụrụ ha maka ịmatakwu iko Moverio na-abawanye eziokwu.
Mercedes na Matternet otu iji mepụta ụgbọ ala na-ebupụta drones
Mercedes ka mere nkwekọrịta nkwekọrịta ya na onye ọrụ ụlọ ọrụ Matternet iji mepụta ụgbọ ala nwere ike ịmalite nnyefe drones
Yuneec Breeze, ihe nlere anya nke oma nke nwere igwefoto mkpebi 4K
Site na China taa ha juru anyị anya site na ngosipụta nke Yuneec Breeze ọhụrụ, obere obere na kọmpat drone nke omume ya ga-eju gị anya.
SEUR sonyere mmasị iji drones maka nnyefe nke ngwongwo
Geotù GeoPost, nke SEUR bụ, ka kwupụtara na ọ nwere mmasị na nso nso a banyere ụwa nke nnyefe drones na njirimara ha.
New York ga-enwe patrol firefighting drone patrol
Ngalaba Na-ahụ Maka Ọkụ na New York City kwupụtara ọkwa nnabata nke ndị otu ọhụụ drones na ọkwa ya.